jeudi, 19 novembre 2020 20:05
Kaominina Morarano Gara : Olona iray matin’ny pesta
Raim-pianakaviana iray sahabo ho 40 taona no fantatra fa matin’ny pesta (peste bubonique) tany amin’ny Kaominina ambanivohitr’i Morarano Gara (MLA), Moramanga, androany alakamisy 19 novambra.
Nanamafy izany ny tompon'andraikitra iray izay nilaza fa voatery nandray an-tanana ny fikarakarana ny razana ny eo anivon’ny fitantanana ny Kaominina.
Tonga nanamarina izany tany an-toerana ny tompon'andraikitry ny fahasalamana avy any Moramanga sy ny solontenan’ny mpitandro filaminana.
Nalevina tao amin’ny fasam-bahiny ao Antsimisoritra ny razana tamin’ny maty masoandro, taorian’ny fizahana araka ny voatondron’ny lalàna amin’ny tranga toy itony.
Manaraka ny fombafomba sy ny fepetra ara-pahasalamana tsy maintsy arahina ny fandevenana.
Nanomboka ny fiandohan'ity herinandro ity, ary haharitra roa herinandro ny fandidiana maimaimpoana ny aretina mamany lava, izay atao ao amin'ny CHRR Bongolava, na hopitaliben’i Tsiroanomandidy.
Natao hanamaivanana ny fahasahiranan'ny Vahoaka sy ho fampiharana ny fitsaboana manaja ny maha-olona, ary indrindra ny ady amin'ny kolikoly ity hetsika ity.
jeudi, 19 novembre 2020 19:45
Aretina haromontana : Namono olona teny Ankadindratombo - Alasora
Misy trangana haromontana ao amin'ny Fokontany Ankadindratombo, Kaominina Alasora, Antananarivo Avaradrano. Efa nahafatesana olona io tao.
Nanapa-kevitra ny fiadidiana ny Kaominina Alasora fa hanao hetsika famonoana ireo alika mirenireny eny amin'io Fokontany io anio alina.
jeudi, 19 novembre 2020 19:33
Ambanja : Gazoala halatra 146 jerikana tra-tehaka
Tratra tao an-tranon’ny mpiasan’ny foibem-pamokarana herinatra an’ny Jirama nandritra ny fisavana natao tao Begavo I ireto gazoala 146 jerikana ireto.
Nogiazana ny fiara 504 camionnette iray sy moto cross iray ary scooter iray.
Tafaporitsaka ny olona notadiavina tao amin’ity trano nahitana ireo gazoala halatra ireo.
jeudi, 19 novembre 2020 19:29
Fifidianana Loholona : Raikitra ny fampielezan-kevitra
Nanomboka androany alakamisy 19 novambra tamin’ny 6 ora maraina ny Fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana LOHOLONA, ary hitohy hatramin’ny alarobia 9 desambra amin’ny misasakalina.
Hotanterahina ny andron’ny 11 desambra 2020 ny latsabato.
Mpifidy vaventy miisa 12 465 manerana ny Nosy no antsoina hanefa ny adidiny amin’izany, izay mitsinjara ho 2 428 ho an’ny Faritany Antananarivo, Antsiranana : 1 414, Fianarantsoa : 3 144, Mahajanga : 1 785, Toamasina : 1 854 ary Toliara : 2 140.
Nanamafy ny Tiako I Madagasikara, nandritra ny fivoriany omaly, fa tsy mandray anjara amin’io fifidianana io.
jeudi, 19 novembre 2020 19:27
19 novembre : Journée Mondiale des toilettes.
jeudi, 19 novembre 2020 19:22
19 novembre : Journée internationale de l'homme.
jeudi, 19 novembre 2020 15:52